जसले आफन्तको शव आधा जलाएर राखे आफैसँग
२०७७ भदौ २९ सोमबार, काठमाडौं । भनिन्छ संसारमा जन्मेपछि हरेक दिन मानिसहरु काम, क्रोध, माया र मोहमा व्यस्त रहन्छन् । जो मरेपछि आरामको बारे सोच्छन् । विचित्र ब्रम्हाण्डको एक स्थान यस्तो पनि रहेको छ जहां मृत्युपछि पनि आराम मिल्दैन । त्यहाँ शरीरबाट आत्मा निक्लिएर जान्छ तर शरीरको दुर्गति गरिन्छ । ... बाँकी अंश»
संसारका सबैभन्दा विलासी रेलहरु
२०७७ भदौ २९ सोमबार, एजेन्सी। रेल नेपाली जन-जीवनमा सुन्नको बिषय मात्र बनेको छ। नेपालमा जनकपुर-जयनगर एक मात्र रेलवे सेवा थियो जुन अहिले ठप्प रहेको छ। रेल विना विश्वका मानिसहरु यात्रा गर्ने बिषयमा सोच्न पनि सक्दैन्न। रेलमा यात्राको बिशेषता हुन् धेरै सुविधा, चाडै गन्तव्य पुग्न सकने र आरामदायी यात्रा हो। आज हामि तपाईहरुलाई विश्वका ६ बाट सबै भन्दा बढि सुविधासम्पन्न रेलको बिषयका चर्चा गर्ने छौ। ... बाँकी अंश»
करोडौं मुल्य पर्ने यस्ता छन् संसारका १० सबैभन्दा महंगा कार
२०७७ भदौ २८ आइतबार, काठमाडौं । यी संसारका त्यस्ता महंगा कार हुन् जसको मुल्य सुनेर प्राय सबै जिब्रो टोक्ने गर्दछन् । यी कारलाई समान्य कमाइ भएका व्यक्तिले कल्पना गर्न पनि असामन्य बिषय हो । कार चढ्नुलाई अहिलेपनि हाम्रो समाजमा बिलासिताको प्रतिक मानिन्छ । ... बाँकी अंश»
सेप्टेम्बर १३ः कश्मीर भारतमा रहन्छ कि पाकिस्तानमा जान्छ भन्ने जवाफ पाएको दिन
२०७७ भदौ २८ आइतबार, सेप्टेम्बर १३ पनि इतिहासका लागि विशेष दिन हो । यो दिन कश्मीर भारतमा रहन्छ वा पाकिस्तानमा जान्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पाएको दिन हो । ... बाँकी अंश»
एकै महिलालाई ४३ हजार भन्दा बढी पटक करणी !
२०७७ भदौ २८ आइतबार, अमेरिकाको मेक्सिको शहरमा बस्ने कार्ला जैसिंटोमाथि ४३ हजार भन्दा बढीपटक वलात्कार भएको सुन्दा जोसुकैको पनि आङ सिरिङग हुन्छ। तर यो वास्तविकता उनले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएन इन्टरनेशनलले दिएको समाचार अनुसार ब ... बाँकी अंश»
इतिहासमा सेप्टेम्बर १२ जहाँ माओवादीदेखि हिटलरसम्मको जोडिन्छ प्रसंग
२०७७ भदौ २७ शनिबार, सेप्टेम्बर १२ तारिख । इतिहासमा यो दिन विशेष दिनका रुपमा मानिन्छ । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, काठमाडौं । बाघ बनको राजा ! भनिन्छ बाघ शिकारमा सधै जित्छ। तर केहि पटक यो शिकारीलाई पनि लडाइ गरेर भाग्नु पर्ने हुन्छ । यूट्यूबमा यस्तै एक भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोमा एउटा बाघ र भालूको बीच लडाइ देखाइएको छ । ... बाँकी अंश»
एक गरीव यसरी बने अर्बपति, ३० जागीर गुमाउँदा पनि भएनन् निराश
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, काठमाडौं । ज्याक मा, जो आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा ३० जागिरबाट रिजेक्ट भएका थिए । तीनै ज्याकसँग अर्बौं डलरको सम्पत्ति छ। अन्य व्यापारीलाई जस्तो ज्याक मासँग कम्प्युटरको राम्रो ज्ञान थिएन । ज्याकलाई कम्प्युटरको कुनै खास ज्ञान नहुँदा पनि आफ्नो अनलाइन व्यावासायिक सपना पूरा गरेर विश्वलाई चकित पारे । ... बाँकी अंश»
यस्ता १० डरलाग्दो सडक जहाँबाट यात्रा गर्न कमैले गर्छन् आँट
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, यदि तपाई तिब्र गतिमा गाडि हुइकाउने गर्नुहुन्छ भने तपाई कुनै पनि समय दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुनेछ । त्यसैले सडकमा तिब्र होइन सुरक्षित यात्रालाई प्रथमिकता दिइनुपर्ने हुन्छ । संसार भरमा यस्ता सडकहरु पनि छन् जहां तिब्र गतिमा गाडि कुदाउन असम्भव हुन्छन् । साथै यी सडकमा ध्यान दिएर गाडि नचलाए चालक घर फर्कने छैनन्। ... बाँकी अंश»
अञ्जनाको मुटुमा प्वाल, सहयोगको याचना
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, आर्थिक स्थिति नाजुक भएकाले सहयोगको याचना गरेकी छिन् । १९ वर्षीया अन्जनाको एक महिनाभन्दा कम उमेरको बच्चा घरमै रहेको बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २५ बिहिबार, काठमाडौं । इरानीकी एक राजकुमारीलाई नपाएपछि १३ जना राजकुमारले आत्महत्या गरेका थिए । जहरा खानम तदज एस सल्टानेह नाम गरेकी राजकुमारीका यति धेरै दिवाना थिए कि प्रस्ताव अस्विकारपछि आत्महत्या गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
संसारकै महंगो तरकारी, प्रतिकिलो १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ
२०७७ भदौ २५ बिहिबार, काठमाडौं । हामीले दैनिक खाने तरकारी कम मुल्यमा सजीलै किन्न सकिन्छ। तर विश्वमा यस्तो एउटा महंगो तरकारी पनि छ जुन धनी व्यक्तिहरुले किन्नु अघि पनि सोच्नुपर्नेहुन्छ। प्राय यो तरकारी एक हजार युरो प्रति किलोग्राममा बिक्दछ । नेपालमा यसको मुल्य १ लाख ३८ हजार रूपैयाँ किलो बराबर पर्न आउछ। ... बाँकी अंश»
ककस्ले सुन्नु, देख्नु, खानुभएको छ ?
२०७७ भदौ २४ बुधबार, एजेन्सी। हामि सबैलाई थाहा छ दिनको सुरुवात सुर्यको प्रकाशबाट हुन्छ। त्यस्तै रात उज्यालो हटनुले। सूर्य उदाउनु र अस्तउनुले एक दिनलाई जनाउदछ। त्यसैगरि दिनलाई हप्ता , महीना र बर्ष गरि छुटाइएको हुन्छ। तर विश्वमा केहि यस्ता देशहरु पनि छन् जहां महिनौ सम्म सूर्य अस्ताउदैनन्। यी देशहरुमा २४ सै घण्टा उज्यालो भइरहन्छ। ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २४ बुधबार, सुदूरपश्चिममा खेलिने ठाडो खेल पछिल्लो समय लोप हुंदै गएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २४ बुधबार, घिउ बनाउनका लागि मही पार्दै स्थानीय देबी खडायत । ... बाँकी अंश»
करोडौं पर्ने यो हो विश्वकै सबैभन्दा महँगो भेडा !
२०७७ भदौ २३ मंगलबार, टेक्सल भेडा ज्यादै दुर्लभ प्रजाति हो । जसको कारण माग बढ्दो छ। यी प्रजातिको भेडा नेदरल्याण्ड्सको तटबाट टाढा टेक्सेलको सानो टापुमा जन्मेका छन् । ... बाँकी अंश»
एउटा भेडाको मुल्य ५ करोड ७३ लाख
२०७७ भदौ २३ मंगलबार, काठमाडौं । नेपालमा एउटा भेडाको मुल्य कति पर्छ होला? बढीमा एक वा दुई लाख । तर के तपाईंले कहिल्यै यस्तो भेडाको बारेमा सुन्नुभएको छ जुन करोडमा बेचियो, यदि छैन भने यहाँ त्यस्तै एउटा भेडाको बारेमा छ जसलाई पढेर तपाईं पनि छक्क पर्नुहुनेछ । ... बाँकी अंश»
जब आकाशबाट खस्यो बहुमूल्य पत्थर, रातारात मालामाल भए स्थानीय
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, काठमाडौं । मानिसको भाग्य चम्कन केहि समय लाग्दैन । जब मानिसको भाग्य चम्कन्छ एक झटकामा सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। एक व्यक्ति सडकबाट एक करोडपति बन्छ । तर यहाँ एक यस्तो अचम्मको घटना उल्लेख गरिएको छ । जुन आकाशबाटै झरेको छ जसको मुल्य अनमोल बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिस्क्याउँदै तुइन
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, सम्भवतः नेपालीको वाध्यताले ओलीलाई पटक पटक जिस्क्याउँछ । तर त्यसले उनलाई असर पारेको देखिँदैन । ... बाँकी अंश»